आज मध्यरातदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा आयो यस्तो कडा निर्णय, के गर्न पाइन्छ के पाइन्न
प्रकासित मिति : ३ भाद्र २०७७, बुधबार प्रकासित समय : २१:०४
काठमाडौँ,भदाै ३।काठमाडाैं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेपछि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बुधबार मध्यरातदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बसेको बैठकले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त निर्णय गरी कार्यानवयनका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
बुधबार मध्यरातिदेखि भदौ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको हो। अत्यावश्यबाहेक सबै सेवा बन्द हुने बताइएको छ ।
तपाईँ बिहिबारदेखि मर्निङ वाक या अरु कुनै अत्यावश्यक नभएको काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ ? एकै छिन त हो, त्यहीँ पर पुगेर आईहाल्छु नि भन्ने सोचमा निस्कने सोच बनाउनुभएको छ ? यदी त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ कारवाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ ।
रातिदेखि लागु हुने निषेधाज्ञाको आदेशानुसार यसपाली भने प्रहरीले अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधिमा खुबै कडाई गर्ने छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भन्नुभयो, “मर्निङ वा इभिनिङ वाक जान्छु भन्ने सोचेर ननिस्किनुहोस्, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारवाही हुन्छ ।
खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सर्वसाधारणको आवतजावतलाई पनि निषेध गरिनेछ । मंगलबार मात्रै उपत्यकामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै २ सय ५ कोरोना संक्रमित संक्रमित भेटिएका थिए ।